လမ်းမှာတင် ဘယ်မှပင့်ဆောင်မရတော့တာကြောင့် ကျောက်မဲတွင်ယာယီကိန်းဝပ်စံပယ်နေတော်မူတဲ့ ပြည်ချစ်ဘုရား – မြန်မာသတင်းစုံ
လမ်းမှာတင် ဘယ်မှပင့်ဆောင်မရတော့တာကြောင့် ကျောက်မဲတွင်ယာယီကိန်းဝပ်စံပယ်နေတော်မူတဲ့ ပြည်ချစ်ဘုရား
ပွငျဦးလှငျမွို့က မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကို ပရိသတျကွီးတို့ ဖူးမွျောဖူးကွမှာပါ….မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကို ပွညျခဈြဘုရားလို့လညျး သိကွပါတယျ…တရုတျပွညျကို ပငျ့ဆောငျချေါယူစဉျမှာ ပွငျဦးလှငျမွို့ ပှဲကောကျရတေံခှနျအရောကျ မျောတျောယာဉျတိမျးမှောကျပွီး ဘယျလိုမှ ဆကျလကျပငျ့ဆောငျလို့မရတော့လို့ အဲဒီနရောမှာပဲ တညျထားပူဇျောခဲ့ရာကနေ ပွညျခဈြဘုရားလို့ ဘှဲ့တျောတှငျခဲ့တာပါ…..
ခုလညျးပဲ ပွငျဦးလှငျမွို့က ပွညျခဈြဘုရားလို အဖွဈအပကျြမြိုး နောကျထပျ ဘုရားတဈဆူ ပျေါထှနျးလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ….. နမျ့ခမျးမွို့မှာ ရောငျးဖို့အတှကျပငျ့ထားတဲ့ မွတျစှာဘုရားဆငျးတုတျောက မွနျမာပွညျပွနျမယျလို့ အိပျမကျပေးတျောမူတာကွောငျ့ ပွနျလညျပငျ့ဆောငျလာရာမှာ ကြောကျမဲမွို့ နောငျပိနျလမျးခှဲမှာ ခတ်ေတနားခိုရာကနေ ဘယျလိုမှ အခွားနရောကို ပငျ့ဆောငျလို့မရတော့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…အဲဒီနရောမှာပဲ ယာယီကိနျးဝပျစံပါယျတျောမူတာကွောငျ့ ဖူးမွျောကွသူတှေ မြားပွားလကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
ဒါကွောငျ့ ဒုတိယမွောကျပွညျခဈြဘုရားလို့ ဖူးမွျောကွသူတှကေ ဆိုနကွေပါတယျ….ပရိသတျကွီးတို့လညျး ကြောကျမဲမွို့ နောငျပိနျလမျးခှဲမှာ သှားရောကျဖူးမွျောလို့ရပါတယျအဲဒီနရောမှာပဲ ဘုရားတညျမလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပါဘူး… ပရိသတျကွီးတို့ ဖူးမွျောနိုငျဖို့ ဒီပို့ဈလေးကို မြှဝလေိုကျရတာပါ…….
ပြင်ဦးလွင်မြို့က မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဖူးမြော်ဖူးကြမှာပါ….မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကို ပြည်ချစ်ဘုရားလို့လည်း သိကြပါတယ်…တရုတ်ပြည်ကို ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူစဉ်မှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပွဲကောက်ရေတံခွန်အရောက် မော်တော်ယာဉ်တိမ်းမှောက်ပြီး ဘယ်လိုမှ ဆက်လက်ပင့်ဆောင်လို့မရတော့လို့ အဲဒီနေရာမှာပဲ တည်ထားပူဇော်ခဲ့ရာကနေ ပြည်ချစ်ဘုရားလို့ ဘွဲ့တော်တွင်ခဲ့တာပါ…..
ခုလည်းပဲ ပြင်ဦးလွင်မြို့က ပြည်ချစ်ဘုရားလို အဖြစ်အပျက်မျိုး နောက်ထပ် ဘုရားတစ်ဆူ ပေါ်ထွန်းလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. နမ့်ခမ်းမြို့မှာ ရောင်းဖို့အတွက်ပင့်ထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်က မြန်မာပြည်ပြန်မယ်လို့ အိပ်မက်ပေးတော်မူတာကြောင့် ပြန်လည်ပင့်ဆောင်လာရာမှာ ကျောက်မဲမြို့ နောင်ပိန်လမ်းခွဲမှာ ခေတ္တနားခိုရာကနေ ဘယ်လိုမှ အခြားနေရာကို ပင့်ဆောင်လို့မရတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…အဲဒီနေရာမှာပဲ ယာယီကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူတာကြောင့် ဖူးမြော်ကြသူတွေ များပြားလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဒုတိယမြောက်ပြည်ချစ်ဘုရားလို့ ဖူးမြော်ကြသူတွေက ဆိုနေကြပါတယ်….ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကျောက်မဲမြို့ နောင်ပိန်လမ်းခွဲမှာ သွားရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာပဲ ဘုရားတည်မလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပါဘူး… ပရိသတ်ကြီးတို့ ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ ဒီပို့စ်လေးကို မျှဝေလိုက်ရတာပါ…….
Previous Previous post: ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Next Next post: အထက (၁) အင်းစိန်တွ င် ဆရာမ က ကျွန်မသား ရဲ့ ပါးနှစ်ဖက် ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဆယ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်တာ